တက္ကသိုလ်တုန်းက …. အမှတ်တရ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တက္ကသိုလ်တုန်းက …. အမှတ်တရ ..
တက္ကသိုလ်တုန်းက …. အမှတ်တရ ..
Posted by fatty on Oct 12, 2010 in Creative Writing | 20 comments
ဒီနေ့ CITY MART ရောက်ဖြစ်တော့ ရွှေကူမေနှင်းရဲ့ ငါတို့တုန်းကတက္ကသိုလ် စာအုပ်တွေ့လို့ လှန်လှောကြည့်ဖြစ်ရသည်။
အိပ်ကပ်ထဲစမ်းကြည့်တော့ ဗလာမို့ဝယ်တော့မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ … ရွှေကူမေနှင်း နာနတ်တောဘက်နေတုန်းကတော့တခါဆုံဖြစ်ကြသေးသည်။
သူ့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး feel က၀င်သွားပြန်ပြီ ……. တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်ကို အမှတ်ရပါဘိခြင်း ……။
၁၉၇၈ ၁၉၇၉ တုန်းက ပင်းယဆောင်မှာနေရသည်။ ထမင်းစား သံချောင်းခေါက်တော့ ဦးအောင်ပြေးရသည် …။ နို့မို့ ဘယ်ကောင်းကောင်းကျန်လိမ့်မတုန်း ..
ဒါတောင် အကောင်းဆုံးထမင်းဝိုင်းရွေးထိုင်တာတောင်မှ … ၀က်သားဆို လက်တဆစ်လောက်အတုန်းလေးတွေ သုံးတုန်းလောက်ပါတာကိုး …။
အိမ်ကပံ့ပိုးနိုင်သူတွေကတော့ ငပိကြော်ဗူးတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့ …။ ထမင်းစောစောစားပြီး ..ထုံးစံအတိုင်း အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ် လမ်းသလားကြသည်။
တွေ့သမျှကောင်မလေးတွေ လိုက်ရှိတ်သည်။ …. တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောင်စပျိုးပြီ …။ recreation centre ဟုခေါ်သော ကျောင်းသားများ
အပန်းဖြေရာ … အနုပညာအသင်း ဘတ်စ်ကက်ဘောကွင်း ဓာတ်ပုံဆိုင် စာရေးကရိယာဆိုင် လဘက်ရည်ဆိုင် အစရှိသည့် အဆောက်အဦကြီးကလည်းပိတ်နေပြီ။
ဘေးပတ်ပတ်လည်မှောင်အတိကျနေပြီ …. ထိုစဉ်က အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်မှာသာ လမ်းမီးတိုင်များရှိ၏။
ရိတ်ကနဲပြေးပြီး မှောင်ရိပ်ခိုလိုက်သည်။ ကျောင်းသားနှစ်ဦးသုံးဦးကိုလည်းတွေ့လိုက်သည်။ ဘယ်ရမလဲကိုယ်ကဦးအောင်ပြေးထားရမည် ….။
အဲဒီ RC အဆောက်အဦကြီးကို မှောင်ထဲ တပါတ်ပါတ်လိုက်တော့ … ဟောတွေ့ပါပြီ …. တခုရှိတာက လုပ်နေကျမှ ကျွမ်းကျင်၏။ …။
အသာလေး နံရံနားကပ်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်ရုံပင် …ကိုယ်ကဦးအောင်စောင့်နေရသည်။ …ခဏကြာတော့ ရောက်လာပါပြီ …. အတွဲတတွဲ …။
ကောင်လေးက စက္ကူလေးခင်းပေးတော့ ကောင်မလေးကထိုင်လိုက်သည်။ …. ပြီးတော့ ..နမ်းကြသည် ..။ အနောက်မှခြေသံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့
ကျောင်းသားနှစ်ဦး ထပ်ေ၇ာက်လာသည်။ နောက်မှရောက်တဲ့ကောင်နောက်မှာဘဲနေပေါ့ …. ရှေံ့လာကျော်လို့တော့မရ … ဒါကနားလည်မှုစည်းကမ်း …
show ကလည်းတဖြည်းဖြည်း ဇာတ်ရှိန်တက်လာပြီ …. ကျနော်တို့အသက်ရှုသံတွေကလည်း .. ပြင်းလာပြီ ..။
ကျောင်းသားတယောက်ဆီမှ ဂလု ဆိုသော အသံနဲနဲကျယ်သွားသည်။ ကျနော်နောက်လှည့်ကြည့်ပြီး အသံမထွက် လက်သီးထောင်ပြလိုက်ရသည်။
ကျနော့နောက်မှာ အားလုံး ခြောက်ယောက်လောက်ေ၇ာက်နေပြီထင့် .. မှောင်မှောင်ပြပြမို့ ဘယ်သူတွေမှန်းမသိ …ကိုယ်လိုလူတွေချည်းပေါ့ ..
နောက်ဆုံး တန်းစီထားသောကျောင်းသားက ကောင်းကောင်းမြင်ရပုံမပေါ် … ခေါင်းပြူပြီးထွက်လာသည်။ ….
ကျနော်အလိုက်သိစွာနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရသည်။ ….အသာလေး ပါတ်ထွက်ပြီး အဓိပတိလမ်းမကြီးဘက်ပြန်ထွက်ခဲ့ရ၏ ….
အသက်ဝအောင်အခုမှရှုရသည်။ စုံတွဲကတော့ ..ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်နေလောက်ပြီ …. ဘယ်တတ်နိုင်မတုန်း … နောက်ဆုံးကတန်းစီထားသူမှာ
ကျောင်းဝင်းစည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှုး ..ကျနော်တို့အဆောင် ဟောကျူတာ ဆရာ ဦးမြင့်ဦး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါတော့သည် ။
……………… ဆရာရေ …အမှတ်တရပေါ့နော် ….ယခုဆရာက PHD ပင်ပြီးသွားပြီး ပါမေက္ခပင်ဖြစ်နေပေပြီ …။
ပျော်စရာ ကောင်းမယ့်ပုံပဲ ကို ဖက်တီးရာ..
အဆောင်မှာနေပြီးတက္ကသိုလ်တက်ရခဲ့ရတယ့်အချိန်တွေကို ပြန်သတိရမိသွားတယ်။ သမိုင်းဝင်းထဲကအစိုးရဆောင်မှာ တစ်လ ၄၀၀ ကျပ် နဲ့ ထမင်းဟင်း (၀က်သားအတုံးသေးသေးလေးတွေ၊ ကြက်သားတုံးသေးသေးလေးတွေ၊ ကြက်ဥသေးသေးလေးတွေ) ပေမယ့် ထမင်းဝအောင်တော့ စားခဲ့ကြရသေးတယ်။ အခုပြန်တွေးကြည့်တော့ ပုံပြင်တွေလိုပါပဲလား။
ကျောင်းတုန်းက အဲဒါမျိုးလေးတွေက လက်လွတ်မခံတဲ့ ကျူတိုရီယယ်ချိန်တွေပေါ့ .. ခုတော့လည်း မြင်ရ တွေ့ရ တော်တော်ကို စိတ်ကုန်လာတယ်.. သမီးလေးတက္ကသိုလ်တက်ရင်တော့ သူ့မအေကြီး နေ့တိုင်း လိုက်သွားခိုင်းရမှာပဲ..
ကျောင်းသားဘ၀က သူငယ်ချင်းတွေနေတဲ့ အာအိုင်တီကျောင်းသားတွေထားတဲ့ စဉ့်ကူးဆောင်ကိုသွားလည်ကြတယ်။
သူဘေးမှာက အာစီတူး ရှိတယ်။
ပြီးတော့ အခန်းထောင့်နားမှာရှိတဲ့ အဖုံးလေးကိုဖွင့်လို့အောက်ငုံ့ကြည့်ခိုင်းတယ်။
အောက်မှာ အတွဲတစ်တွဲ ………..တွေးကြည့်ပါတော့……………………………..။
တစ်ခါကမန်းလေးက အင်းဝ-9 ဟောလ်ထဲမှာ။
ညနေခြောက်နာရီလောက်ကတဲက အတွဲကိုစောင့်နေတာ ဝေ့၀ိုက်ပြီးစည်တော်ကြီးလုပ်နေတာ
ခွေထွက်လာရင် ၀ယ်ကြည့်လိုက်ရင် ရပြီ။
ကျောင်းဆိုတာနဲ့ အဆောင်တွေရှေ့က ညတေးသမားလေးတွေကိုပြေးမြင်မိတယ်။
ကိုင်ဇာသီချင်းတော်တော်များများမှာ ပါခဲ့ဘူးတဲ့ ကျောင်းသားဘ၀အပျော်လေးတွေကို အခု အရမ်းလွမ်းမိတယ်ဗျာ။
ကျောင်းဖွင့်ရင်ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာ “ကျောင်းဖွင့်ရင် ရီးဇားလေးကို ခေါ်ပြီး အဓိပတိလမ်းမှာ တွဲလျှောက်မယ်”
တက္ကသိုလ်မြေနေ၀င်မှာစိုးတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းမှာ “အပျော်ဆုံးပဲကွယ် ဒီနေရာလေးမှာ ပျော်ရွှင်စွာကျောင်းတက်ရတာ အကောင်းဆုံးဘ၀ပဲ ကျောင်းတော်ကြီးရယ် ကျောင်းပျော်လေးရယ် ထာဝစဉ်ဒွန့်တွဲလို့နေချင်တယ်”
မွန်းအောင်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ ၈/၈၂ အင်းလျား၊ အောင်နိုင်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ မောင့်သီရိမေ၊ အဆောင်သူအလွမ်းပြေ၊ ခိုင်ထူးဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ စစ်ကိုင်းလမ်း၊
ဖိုးချိုဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ အဆောင်သူရဲ၊ လွှမ်းမိုးဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ ကံ့ကော်မြို့တော်၊ နောက်ပိုင်းအဆိုတော်တွေထဲက ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ဂျဒ်ဆင်ထိပ်ကလရိပ်ပြာ၊ အောင်ရင်ရဲ့ အင်းလျားအဆောင်သူလေး စသည်ဖြင့် ကျောင်းသီချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကြီးရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လွမ်းနေမိတယ်ဗျာ။ ကျောင်းလွမ်းတဲ့အကြောင်းရေးတာ ကျောင်းသီချင်းတွေ အကြောင်း ရေးသလိုဖြစ်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုဖက်တီးရေ။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းပိတ်ချိန်လေးတွေမှာ ကျောင်းပိတ်လို့အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့ ရီးဇားလေးကို သတိရပြီး အသံကြောင်ကြီးနဲ့အော်ဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်မှာပါတဲ့ စာသားလေးတွေကို ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါ။
“ကိုယ်လေနေ့မှန်းညမှန်း မသိဘူး အချစ်ရေ့
နေမျိုးဆေးရေးဆိုခဲ့တဲ့ နင်ပိုင်ဆိုင်သောနေ့ရက်များ သီချင်းထဲက သီချင်းစာသားလေးတွေပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျောင်းပိတ်ချိန်ဆိုတာ တကယ်ကိုကုန်ခဲလွန်းတဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲဗျာ။
အားလုံးသော ကွန်မင့်ရေးသူများသို့ ……………………………….
တခြားသူတွေက ..ကျမယ်။ (မမိုက်ရိုင်းကြနဲ့နော်၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေးကြ)
ခေါင်းလျှော်တာ ကြာသွားလို့ နှာချေပြီး နှာရည်ကျတာ.. မမိုက်ရိုင်းဘူးနော်.. နှာစေးပျောက်စေး သောက်ရင် ပျောက်တယ်..
တက္ကသိုလ်တုန်းက အမှတ်တရ ဆိုလို့.. ဖတ်ကြည့်တာ.. ဆူးအတွက်တော့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး.. တက္ကသိုလ်မှာ ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတောင် မရှိဘူး.. အဝေးသင်.. တာဝမှာ ကျောင်း ၁၀ရက် အနီးကပ်တက်.. ၁၀ရက်မှာ ၂ရက်သွားတယ်.. တရက်က အဆိုင်းမန့် တင်ဖို့.. တရက်က စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ နေရာနဲ့ အချိန်ကို သွားဖတ်.. နေကလည်းပူ.. လမ်းမပေါ် လမ်းလျှောက်ရက် ကတ္တရာတွေ ဖိနပ်နဲ့တောင် ကပ်ပါလာသေးတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ၃နှစ်ပြီးလို့ ဘွဲ့တွေရ.. ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်လာသတဲ့ကွယ်.. ဟဲဟဲ..
တက္ကသိုလ် ၄ နှစ်တက်ခဲ့စဉ်အတွင်းဟာ ပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန်လေးတွေပါပဲ။ လွမ်းမိတယ် အဓိပတိလမ်းလေးရယ်….
အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ ခောတ်ဟောင်းတေးတွေဖွင့်ပြီး စားမြုံပြန်နေကြတဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ လို ခလေးတွေက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တိတ်စိတ်စွာနေပေးကြပါသည်ခင်ဗျား။
တက္ကသိုလ်တုန်းက အမှတ်တရ ……တစ်ခါမှ အဲလို အတွေ့အကြုံခံစားချက်မျိုးမရခဲ့တာတော့ သေချာတယ် ။
အမှတ်တရ ဆိုလို့ ဆူးပြောသလိုပဲ နေပူပူ ဖုန်ထူထူမှာ ကားအကြာကြီးစီးပြီး တာဝ သွားခဲ့ရတာလေးပဲရှိတယ် ။
သာဓုပါ မြေးကလေး ပုရယ် ….။
ပြောပြစရာ အမှတ်တရရှိတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို အားကျတယ်။
အဝေးသသင် ကို တက်သုတ်ရိုက် တက်ခဲ့ရတော့ ပြောပြစရာ ထူးထူးထွေထွေ မရှိခဲ့ပါ။
ကိုပေါက်လက်ချက်နဲ့.. ရန်ကုန်ကတေးသံသွင်းတချို့သီချင်းစလက်ရှင်တွေ ပြန်ကူးပေးနေရချိန်မှာ… အခုလည်း.. တွေ့ပြန်ပြီ..တက္ကသိုလ်သီချင်းလက်ရွေးစဉ်…။
မကြာခင်လေးကတင်.. ဇ၀နရဲ့ ကောလိပ်ဂျင်ဖတ်ပြိး… တွေးနေမိတာ..ဦးဖက်တီးလုပ်မှ.. အဘတို့ကောလိပ်ဂျင်ခောတ်ကိုတောင် ပြန်လွမ်းမိသလို…ဖြစ်သွားတယ်..။
ကျုပ်တော့ ..တက္ကသိုလ်ဘာရတုတုံးကလည်းမသိဘူးထွက်တဲ့ သီချင်းခွေအတွဲကြီးဝယ်ထားတာမှတ်မိတယ်..
အဝေးသင် ကို တက်သုတ်ရိုက် တက်ခဲ့ရတော့ ပြောပြစရာ ထူးထူးထွေထွေ မရှိခဲ့ပါ။
ခေတ်စံနစ် …အရကိုး ..သီးခံကြပါ။
ဟုတ်တယ်နော်။ ကျောင်းသားဘ၀က အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ အသက်တွေဘယ် လောက်ကြီးကြီး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ဘယ်လောက်ပျော်ပျော် ကျောင်းသားဘ၀က အပျော်တွေကိုတော့ ဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူး။
ဘာလို့ မရှိရမှာလဲ ပြောစရာရှိပါတယ်
ကောင်မလေးတွေ ကအလန်းစားစတိုင်အမျိူးမျိူးနဲ့ ဒုတိယနှစ်လဲကျရော
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့မှကျောင်းထဲဝင်ခွင့်ရမယ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေလဲ လုံချည်တွေဘာတွေစွန်တောင်ဆွဲကြပေါ့
ကန်တင်းမှာတင်လွယ်အိတ်ထဲက လုံချည်တွေထုတ် ဘောင်းဘီအကျပ်တွေပေါ်ထပ်နဲ့ တကယ်ကိုလွမ်းစရာပါ………..
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလဲ ဘယ်လောက်သာယာတယ်မှတ်လဲ
နောက် ၂မှတ်တိုင်လောက်ပြန်လိုက်ရင် ရွာသာကြီးသားသတ်ရုံရှိတယ်
ကြားထဲမှာ ထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းရှိသေးတယ် ကျောင်းတက်စတုန်းက ကျောင်းအဝင်လမ်းကြီးထဲမှာ မလေးရှားပိတောက်ပင်တွေစီတန်းနေတာပဲ
နောက်ဆုံးနှစ်တက်တော့ခုတ်ထားလိုက်တာပြောင်ရှင်းလို့အကြောင်းက အဲဒီကျောင်းအဝင်လမ်းမကြီးရဲ့ဟိုး…….အဆုံးမှာခမ်းနားတဲ့အဆောင်အကြီးကြီးဆောက်ပီး အပင်တွေကကွယ်နေလို့ တာလမ်းပေါ်ကနေမြင်ရအောင်လို့တဲ့။ ပီးတော့နာဂစ်လဲဝင်လိုက်ရော အဆောင်သစ်ကြီးရဲ့ အမိုးအချပ်လိုက်ကြီးက ကျောင်းနောက်ကကြက်ခြံဘက်ကိုလွင့်သွားရော……………..
မြို့ ထဲကနေလာတက်တဲသူတွေဆိုရင် မြွေတွေဘာတွေကြောက်ရသေးတာ
စာသင်ရင်းနဲ့ “တီချယ်မြွေလာနေတယ်” ဆိုတာက မကြာခဏ တော်ပါပီမပြောချင်တော့ဘူး…………..:)
ဖက်တီးရေ ဒီအကြောင်းအရာက မင်းစခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနော်။ ကိုယ်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေလို့ ၀င်ရေးဖြစ်သွားတယ်။
ရေးသူအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိရင် ဒီကွန်မင့် က ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးကွန်မင့်ပါ။